हार्बर्नबाट गर्भावस्थाको बखत पुनःनिन यो औषधि गर्भवती र कुन समयमा सम्भव छ
र ग्यास्ट्राईटमको उत्पादन बढाउने सम्बन्धित अन्य राज्यहरू, एपिगास्ट्रिक्समा, पेटको ओभरफ्र्याभको गुरुत्वाकर्षण, पेटको ओभरफेप्टेम्बरको भावना, डिस्टिप्सिया। यस मामलामा, औषधिले रोगको उपचार गर्दैन, तर यसको अभिव्यक्तिको अप्रिय लक्षणहरू हटाउँदछ।
हार्टबर्नबाट गर्भावस्थाको बखत पुनःनिन गर्न सम्भव छ? <____2>
resnen महिलालाई प्रभावको लागि विशेष अध्ययनहरू र भ्रुणको इन्ट्राघाटीय विकासको लागि सञ्चालन गरिएको थिएन। तसर्थ, कहिलेकाँही यो शब्द फेला पार्न सक्नुहुन्छ जुन सुविधाहरू गर्भवती हुन सक्छ यदि लाभहरू जोखिम भन्दा बढी छ भने। तर अभ्यास गर्दछ कि renny फल वा गर्भावस्था मा कुनै नकारात्मक प्रभाव छैन। तर औषधि को सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट छ।
डाक्टरहरू भन्छन् कि यो मुटुबाब सहन असम्भव छ। गर्भवती गुनासोहरु कि यो असम्भव छ। अवश्य पनि, सब भन्दा सहीले गर्भावस्थामा कुनै किसिमको गर्भावस्था, जस्तै लोक र अन्य रोटी क्रस्टिज र अरूले गर्व गर्ने तरिका देखाउन सक्छ। तर सबैले त्यस्तो केहि फेला पार्न सक्दैनन् जुन व्यक्तिगत मामला मा मद्दत गर्दछ (समान दुध विस्तार गर्ने एसिडिटी प्रत्येक गर्भवती हो), र यो सँधै सम्भव छैन, सबवेमा वा बैठकमा, बीउ विशेष गरी हुँदैन हिंडे
<< p> ध्यान दिन केवल एक मात्र चीज: गर्भावस्थाको 1 महिनासम्म, यी ट्याब्लेटहरूको रिसोर्ट गर्न असम्भव छ। म भन्छन कि एउटा अम्पिंग र यो तथ्य यो तथ्य 12 बर्ष उमेरका बच्चाहरूलाई अनुमति थियो भन्ने तथ्य। जे भए पनि, एलर्जी प्रतिक्रियाहरूको बारेमा सावधान रहनुहोस् (क्विन्क़ातिक प्रतिक्रियाहरूको बारेमा, दाना, एनाफिलाक्टिक प्रतिक्रियाहरू) को धेरै दुर्लभ सूजन)। पहिलो स्वागत पछि, ट्रेस।
कसरी गर्भावस्थाको बखत रेन्नीलाई कसरी लिने?
रेननीलाई लिनुहोस्: मौखिक गुहामा केवल 1-2 ट्याब्लेटहरू। यदि त्यहाँ आवश्यकता छ भने, दुई घण्टा पछि तपाईं ट्याब्लेटको रिसेप्शन दोहोर्याउन सक्नुहुन्छ। दिनको कुल 1 16 टुक्रा लिन सकिन्छ। फार्माक्सिष्टहरू आश्वस्त हुन्छन् कि यदि तपाईंले समय-समयमा यसलाई समयदेखि यसलाई रिजोर्स गर्नुभयो भने, अनुमति दिईएको छ र अनुमति नदिनुहोस्। यस बत्तीमा, "सबै गर्भावस्था मात्र र पिएझको भविष्यका टिप्पणीहरू" थोरै छन्।
<< p> र मद्दतको लागि पुन: परामर्श लिनु अघि, अझै तपाईंको डाक्टरसँग परामर्श लिनुहोस्: रेन्नी पनि प्रयोगको लागि केही भिन्नताहरू छन्, उदाहरणका लागि, मिर्गौलाको विरूद्ध।
<< p> तर, यदि हामी रेन्नीको बारेमा कुरा गर्दैछौं भने, यो औषधि डाक्टरहरूको सबै शंका बाहिर छ। रेन्निय एन्सिलिडबाट, यो यसको संरचनाको उचित हुन्छ: यसले एल्युमिनियम समावेश गर्दैन र नकारात्मक साइड इफेसनहरू, जस्तै कब्जहरू समावेश गर्दैन। रेन्नी कम्पोनेन्टहरू लगातार मानव शरीरमा ट्रेल तत्वहरूको रूपमा उपस्थित छन्, त्यसैले यो एकदम सुरक्षित छ।
गर्भावस्थाको समयमा लक्षणहरू: कसरी यसको साथ व्यवहार गर्ने?
हार्टबिरुवाको अतिरिक्त, एक गर्भवती महिलाले डिस्प्रिया महिलालाई अनुभव गर्न सक्दछ: मतली, बस्ट्रोनिटेलल पर्चाको क्षेत्रमा। आफ्नै तरिकामा प्रत्येक लक्षणहरू असुविधा र पीडादायी हुन्छ, तर खराब जब तिनीहरू तुरून्त देखिन्छन्।
हार्टबर्न गर्भावस्थाको रूपमा, एक नियमको रूपमा, एक निकासी समावेश गर्दछ, जुन नियन्त्रण गर्न वा खराब, ग्यास संग्रह नियन्त्रण गर्न सकिदैन। "कन्फ्युकुजूस राज्य" ले तिर्नैको तेस्रो त्रैमासिकमा मात्र प्रकट गर्न सक्दछ, जब भविष्यमा मातृत्व बिदामा छ र कुनै पूर्ण महिनामा, जब एक महिला काममा भाग लिनु पर्छ र मानिसहरू बीच हुन आवश्यक छ।
पक्कै पनि, कुनै "रोटीको रोटी", बीउ, सोडा समाधानले अप्रिय लक्षणहरूलाई कम गर्दैन। हो, र यो कोषहरू प्रयोग गर्न असम्भव छ यदि महिला एक बैठकमा, सार्वजनिक यातायातमा, सहकर्मीहरूको सामने देखिए।
<< p> आफैलाई दु: खबाट बचाउनको लागि, जब अत्यधिक ध्यान आकर्षित गर्न तपाईंलाई एक विशेष साधन चाहिन्छ - एक कम्प्याक्ट गर्नुहोस्, जुन लगभग सावधानीपूर्वक प्रभाव लिन सक्दैन र तुरुन्तै प्रभाव लिन सकिन्छ।
प्राय: गर्भवती महिलाहरू रेनीइ र आरामदायक पिलहरू जुन जताततै तिनीहरूसँग बोक्न सकिन्छ र कहिँ पनि लैजानुहोस्।
मा हार्टबर्न को कारणहरू
तथ्य यो छ कि स्टर्नमको जलेको पेटको एसोफोसमको लम्बामा पुगेको छ, एक प्रसिद्ध तथ्य हो। तर कारणहरू जसको कारणहरू जसको खस्छन् धेरै गर्भवती महिलाहरू, र, यसको मतलब यो हो कि तिनीहरूले हार्टबर्नको सम्भावना कम गर्न कसरी व्यवहार गर्ने भनेर थाहा पाउँदैनन्।
पाठ्यक्रममा, पेटको दबाबको दबाबको अवस्थामा व्यर्थमा (ड्रग्सको रिसेप्शनको बाहेक), तर त्यहाँका कारणहरू छन् जुन ट्याब्लेटहरूलाई मद्दत गर्न वा ट्याब्लेटहरू रोक्न सकिन्छ।
Fhuge वैज्ञानिक केन्द्र, अपमानजनक, जिनिकोलोजी र पर्खाल विज्ञान को लागी। शैक्षिक v .. क्लाकुव मन्त्रालय र रूस, मस्कोको स्वास्थ्य र सामाजिक विकासको मन्त्रालय; Gou vpo पहिलो मस्को राज्य मेडिकल विश्वविद्यालय। I. Sechenonaa
HESBREBRANT मा गर्भवतीमा गर्भवतीमा करीव 500% महिलाको करीव 500% महिलाहरू हुन्, तर प्राय: दोस्रो र III कारीमहरूमा। औषधिको छनौट आमा र भ्रूणको लागि सुरक्षा फ्रेमहरूमा सीमित छ। संरचनामा सब भन्दा सन्तुलित डाटा, गर्भवती महिलाको हार्दिक उपचारमा रेनेनी ड्रगको राम्रो संरचनात्मक गतिविधि प्रस्तुत गरिन्छ।
सम्भवतः, थोरै व्यक्तिहरूले घमण्ड गर्दैनन् कि गर्भावस्थादेखि हार्दिकबाट ग्रस्त थिएनन्। इसोफी र तेस्रो त्रैमा एसिभिक सामग्रीमा सम्बन्धित गर्भवती महिलाहरूमा सम्बन्धित कुनै पनि सबैभन्दा अप्रिय संवेदनाहरू। रेनीई सम्पूर्ण गर्भावस्था द्वारा लागूपदार्थको छनौटको एक औषधि हो, किनकि भविष्यमा आमा र उनको बच्चामा यसले हानिकारक प्रभाव पार्दैन। हामी विस्तारमा विचार गर्न कोसिस गर्न कोसिस गर्नेछौं कि रेनोले गर्भावस्थामा, अनुप्रयोगको सुविधाहरू, contrictications र सम्भावित साइड इफेक्टहरू।
यो बुझ्नको लागि रेनीनीलाई सिफारिस गर्न सम्भव छ कि छैन कि गर्भवती महिलाको कार्यका विशेषताहरू र यस औषधिको संरचनाको सुविधाहरू व्यवहार गर्नुपर्दछ। त्यसो भए, यो औषधि पेटमा अत्यधिक एसिडको तटस्थ हुन सक्षम छ, जबकि शोकको झिल्लीको सतहबाट अवशोषित हुँदैन, र यसैले रगतमा खस्दैन।
renny लक्षण थेरापी को रूपमा प्रयोग गरीन्छ, किनकि यसले रोगको कारणलाई हटाउँछ, तर यसको लक्षण मात्र। ड्रग्स रेननीको महत्त्वपूर्ण गुणहरूको, यसलाई गर्भवती महिलालाई लिन अनुमति दिँदै यसको संरचनामा एल्युमिनियमममा अनुपस्थिति हो। गर्भावस्थाको बखत पुनर्गी, यदि तपाइँ प्रतिक्रिया गर्नुहुन्छ भने, यसले कब्जको कारण गर्दैन र आन्द्राको कामलाई उल्ल .्घन गर्दैन।
<< P> प्रश्नमा एन्टिस्ड ड्रग्स क्याल्सियम कार्बोनेट र म्याग्सशियम कार्बोनेटको साथ र पेटमा म्याग्माशियम र क्याल्सनियम नुनमा घुसेको छ। राहतलाई rengned पछि -5--5 मिनेट पछि मनाइन्छ। आंशिक रूपमा औषधि पेशाबबाट निकालिएको छ, र यसको प्राय जसो ईन्जेबल यौगिकहरूको रूपमा मलबाट आउटपुट हो।
म यो नोट गर्न चाहन्छु कि RENNY हार्टबर्न मात्र होईन, तर अन्य dyspetic लक्षण, काल्पनिक, बेल।
resny गर्भवती महिलाहरूको लागि हार्टबर्न को पहिलो लक्षणहरु मा लिन सिफारिस गरीएको छ, तर यो दिन 1 peble बत्तीहरु भन्दा बढी लिन योग्य छैन। यदि, ट्याब्लेट खाए पछि, बारम्बार हृदयसम्म आवेग पछि, फेरि दोहोर्याउन सकिन्छ एक घण्टामा दोहोर्याउन सकिन्छ। औषधिको विस्तृत विवरणमा यो संकेत गरीएको छ कि भविष्यमा आमाले भावी आमालाई गर्भावस्थादेखि र 12 बर्ष भन्दा कम उमेरका बच्चाहरूको लागि प्रयोग गर्न सक्दछन्।
यसलाई पनि ध्यान दिइनु पर्दछ कि रेनीनीलाई फलामको तयारीको साथ लिनु हुँदैन, किनकि यसले पछिल्लोको कार्यको तटस्थ छ।
मनोवैज्ञानिक निकासीमा गर्भवती महिलालाई निकाल्दछ, त्यसैले यसले एक निराशाजनक अवस्था वा यदि एक महिलामा गर्भावस्थामा समस्या हुन्छ भने बाटोको काम, त्यसपछि बढ्दो हुन सक्छ। / LI>
वेबर्नलाई रोगशास्त्र ठानिदैन जुन महिला वा उनको बढ्दो बच्चालाई हानी पुर्याउँछ। यद्यपि यस्ता राज्यले तपाईंको जीवनलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा जटिल बनाउन सक्छ:
यस्तै अप्रिय परिणामहरूबाट बच्न डाक्टरले हार्दिकबाट गर्भावस्थामा पुनःलाई नियुक्ति गर्ने छन, जुन यस अवधिमा पूर्ण रूपमा सुरक्षित मानिन्छ।
<< p> लेपनलाई एक निर्धारित औषधि गर्भावस्थाको बखत rnny पिउन को लागी, तर निश्चित को लागी तपाइँ यी ट्याब्लेटहरु को बारे मा अरु ट्याब्लेटमा रुचि राख्नुहुन्छ बताउँछ।
सक्रिय औषधि क्याल्सियम र म्याग्नियम कार्बोनेटेट नुनहरू हुन् जुन भविष्यमा आमा र उनको बच्चाको लागि पूर्ण रूपमा सुरक्षित छन्। ट्याब्लेटहरू3प्रकारका उत्पादनहरू छन्:
तथापि, यो प्रारम्भिक मृतकको गर्भावस्थामा रेननी प्रयोग गर्न लायक छ। यो तथ्यसँग सम्बन्धित छ जुन 1-18-1-18 हप्तासम्म सबै अंगहरू र भ्रुण प्रणालीहरूको सक्रिय गठन छ। तसर्थ, रेन्नी लगायतका कुनै औषधिले यस प्रक्रियालाई असर गर्न सक्छ। वास्तवमा अज्ञात हुन सक्छ, तर अझै पनी गोलीहरू2त्रैमासिकमा गोलीबारीमा स्थगित गर्नु राम्रो हो।
हृदयलाई हृदय र शान्तपूर्वक बाँच्नु अघि। तर गर्भावस्थाको बखत उनले मलाई सबैमा पुर्याई। यो घृणित भावना, जलाउने र असुविधा बिना कुनै खाना पछि शाब्दिक रूपमा देखा पर्यो। न त खाऊ - यहाँ हार्दिक छ, कृपया। धेरै औषधीहरु लाई चिन्तित, म renny मा रोके। उसको र गर्भावस्थाको समयमा सुरक्षित रूपमा लिईन्छ। रमाईलो स्वाद ट्याब्लेटहरू (मलाई सबैभन्दा बढी सुन्तला रंगको रूपमा मनपर्दछ) रिसेप्शन पछि तुरुन्त कार्य। यो सस्तो छ। यी सबै बर्षका लागि मसँग एकल पक्ष प्रतिक्रिया थिएन। मलाई धेरै मनपर्छ।